P90X3 Heshiiska: 6 BILAASHAD BILAASH AH LACAG LA'AAN AH
Home » Xeebta » P90X3 Heshiiska: Ka hel 6 Lacag Bixin BILAASH ah oo bilaash ah
P90X3 Heshiiska: Ka hel 6 Lacag Bixin BILAASH ah oo bilaash ah
Beachy P90X3 Dalabka Gaarka ah
Hel 6 Lacag Bixin BILAASH ah oo bilaash ah Bixinta Bixinta Dammaanadda ee heshiiska P90X3
Soo iibso P90X3 Now - hadiyado lacag la'aan ah oo lagu daray iibsashada!
Ku saabsan P90X3:
P90X3 waxay isku daraysaa dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo aan la fileyn oo haya muruq kasta si loo helo saacad badhkeed oo buuxa xannibaad buuxa leh oo leh jadwal aad u habeysan, oo ah jadwal aad u habaysan, kaas oo ka baxaya barnaamijyada kale ee tababarka ee boodhka. P90X3 waa tababarka buuxa ee aad sameyn karto waqtiga nuska.
Waa maxay shaqooyinka aad ka heleyso P90X3?
P90X3 waxaa ku jira 16 shaqooyin nusqa ah saacado yar
Shaqo-qabashada waxaa ka mid ah lix kobcinta dhisida muruqyada dhismaha, saddex tababarka awoodda tababbarka, afar dabacsan oo jajab ah
& isku dheelitiridda jimicsiga, iyo saddexda tababarka tababarka
Waa Maxay Xidhmada Lacagta?
Hadiyad Bonus ah #1: Tilmaamaha Xirfadaha - Tilmaamaha jirdhiska ee P90X3 waa tallaabo tallaabo tallaabo ah si loo helo sida ugu habboon ee barnaamijkan jirdhiska.
Hadiyad Bonus ah #2: Tilmaamaha Nafaqada - Tilmaamahan wuxuu bixiyaa hab fudud oo la cuno. Iyada oo tilmaamahan nafaqada ah, waxaad awood u yeelan kartaa oo aad la qabsan kartaa si aad uhesho ujeedooyinkaaga jirdhiska. Waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso helitaanka jirkaada aad rabto - oo sidaad u ilaaliso.
Hadiyad Bonus ah #3: Jadwalka Tababbarka P90X3 - Tony wuxuu ku siinayaa tababar maalin kasta ah, sidaa daraadeed dhamaantiis waa inaad sameysaa oo aad siisaa sida ugu fiican
Hadiyad Bonus ah #4: "Sidee loo kobciyaa" DVD - DVD-kani waa mid sahlan. Waa fariin P90X3 kaasoo ku tusaya sida loo gaaro natiijooyinkaaga ugu fiican wakhtiga ugu dhakhsaha badan.
Hadiyad Bonus ah #5: Cadaadiska Pro-Grade Pro - Tani waa iska caabin mudan oo kaa caawineysa inaad muruqyadaada ku adkaysato adigoo ku siinaya diidmada saxda ah.
Hadiyad Bonus ah #6: 24 / 7 Taageerada Online - Ku dhiirigalinta wakhti gaar ah 'khadka tooska ah' oo loogu talagalay khabiirada fayadhawrka ee Beach Beach iyo taageerada P90X3.
Waxaad ka iibsan kartaa P90X3 ee 3 lacagaha bil kasta ee $ 39.95 (+ $ 19.95 maraakiibta iyo gacanta ku haynta) ama waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka lacag bixinta marka la bixiyo.
Riix halkan hoose oo ku saabsan Faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan heshiiska P90X3
October 17, 2016 Admin Xeebta No Comment